Kuongororwa kwematambudziko aripo mumishonga yemishonga manejimendi uye kugadzirisa
(1) kusarudzwa kwemidziyo. Kune mamwe matambudziko mukusarudzwa kwemidziyo yemishonga, senge kusarudzwa neruzivo (pasina kuverenga chaiko, kana kukwana data kukarukureta), kutsvaga bofu kwekufambira mberi, uye kusakwana kwekuferefetwa kwedata remuviri, izvo zvinokanganisa zvakanyanya kugona uye hupfumi hwemidziyo.
(2) kuisirwa michina uye kudzidziswa. Mukuita kwemishonga yekumisikidza mishonga, kufambira mberi kwekuvaka kunowanzo kutarisirwa, kushaya hanya nehunhu hwekuvaka, izvo zvinotungamira mukuwedzera kwemitengo yekuchengetedza michina munguva inotevera. Uye zvakare, kudzidziswa kwakaringana kwekuchengetedza michina uye vashandi vekushandisa kunoisa njodzi kumishonga yemishonga manejimendi uye kugadzirisa.
(3) kukwana kwakakwana kwekudyara mukutarisira nekuchengetedza ruzivo. Mazuva ano, kunyangwe hazvo bhizinesi richikoshesa kwakanyanya kune manejimendi manejimendi uye kugadzirisa, pamwe nemidziyo yekuchengetedza marekodhi manejimendi uye rekodhi yematanho ekutanga uye akaita mamwe, asi mamwe matambudziko achiripo, akadai sekuoma kupa kuenderera kwekuchengetedza data, kushomeka kweanoshanda mishonga yemidziyo yakadomwa ruzivo, senge kudomwa, kudhirowa, nezvimwewo, izvi zvisingaoneki zvakawedzera kuomarara kwemanejimendi manejimendi, kugadzirisa uye kuvakazve.
(4) manejimendi system. Kushaikwa kweanobudirira manejimendi manejimendi uye nzira, zvichikonzera manejimendi yemishonga yekuchengetedza michina vashandi haina kukwana, vashandi vekuchengetedza vanoshaya standardization, mishonga yemishonga manejimendi uye nzira yekugadzirisa ichisiya kuchengetedzeka njodzi dzakavanzika.